Olika voafintina anaty - Wikipedia
Ny olika voafintina anaty (OVA) (amin'ny teny anglisy : integrated circuit) dia olik'aratra nafintina mba hitana anaty velarana kely. Ny mpampita aratra ikorian'ny rio anatin'io olik'aratra io dia mpampita tapany (amin'ny teny frantsay : semi-conducteur), izay vita silisiôma.
Olika voafintina anaty (tahiry EPROM)
Ankehitriny dia feno olika voafintina anaty ny fitaovana haikoriam-boanaratra ary anisan'ny nampivoatra be ny haikoriam-boanaratra ny fampiasana ireo olika voafintina ireo. Manomboka amin'ny finday ampiasaina hatrany amin'ny fitaovana fanaovana raharaha an-trano dia misy olika voafintina anaty.
Mety ahitana tirazisitôro hatrany amin'ny iray miliara ny OVA izay manana velarana latsaky ny iray santimetatra toradroa. Arakaraky ny mampivoatra ny teknolojia dia mihakely hatrany ny velarana ilain'ny tirazisitôro iray. Latsaka tambanin'ny 100 nanometatra ny hanifiny tamin'ny 2008 ary ho latsaky ny 50 nanometatra ny hanifiny amin'ny 2013.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Olika_voafintina_anaty&oldid=640087"
Dernière modification le 1 Jolay 2013, à 15:11
Voaova farany tamin'ny 1 Jolay 2013 amin'ny 15:11 ity pejy ity.